Ngabe Unamazinyo Azwelayo | OptiSmile
Ukugwema Iziphuzo Zakho Ozithandayo
Ukungakhululeki Lapho Udla
Amazinyo azwelayo akufanele alimaze usuku lwakho futhi.
I-periodontist ingcweti yamazinyo enokuqeqeshwa okuthuthukile. Okukhethekile ekuhlolweni nasekuphathweni kwazo zonke izifo ezithinta izicubu ezisekela izinyo. Lokhu kwaziwa ngokwesayensi njengezicubu ze-periodontal, okusho nje ukuthi izinsini namathambo azungeze amazinyo akho.
Odokotela besikhathi baseNingizimu Afrika bahlukile futhi bathathwa njengodokotela besikhumba kanye nodokotela abahlinzayo bepulasitiki bezicubu zomlomo!
Ukwelashwa Kwamazinyo Ozwelayo
Izinyo elibucayi alihlali liyinkinga enkulu futhi lingavele lisuka ekudleni kwe-asidi okonakalisa ulayini wezinsini. Kwa-OptiSmile, uzofunda ukuthi lokhu kungaphathwa kalula ngokushintsha indlela odla noma uphuza ngayo izinto ezithile nangokusebenzisa umuthi wokuxubha okhethekile.
Uma izinyo lakho libuhlungu imizuzwana engama-30 noma ngaphezulu lapho uphuza okuthile okufudumele noma udla u-ayisikhilimu, kungenzeka ukuthi unembobo noma uqhekeke ezinyoweni. Lokhu kungahle kwehle uma kungabhekwana nakho zisuka nje.
Yini ebangela ukuzwela kwamazinyo?
Izimbangela ze-cementum ziguga.
Kakhulu Amazinyo Amhlophe
Kodwa-ke ngokuzwela ngokweqile izimbangela ezingaba khona yilezo ezidalula i-dentin eningi njengo:
Amazinyo Aphukile / Aqhekekile
Ukwelashwa Kwangaphakathi Kwesihlalo
Ngoba amazinyo abucayi ngokwedlulele abangelwa inkinga eyinkimbinkimbi yamazinyo, kubalulekile ukungena ku-OptiSmile futhi udaba luphathwe ngqo esihlalweni. Lokhu kungabandakanya umqhele, ukugcwaliswa noma ukuvezwa, kuya ngenkinga. Uma unesifo sezinsini esidlulele esigabeni esithuthuke kakhulu, uzodinga nalokhu kuphathwa.
Uma ulahlekelwe izicubu zezinsini kusuka empandeni, kunganconyelwa ukufakelwa insini ukuze kuhlanganiswe izimpande ukuze zivikelwe futhi. Uma unokuzwela okuphikelelayo futhi okunzima, kufanele kuthathwe i-x-ray ukuthola ukuthi ngabe impande ingaba yini inkinga, esusa izinzwa ngakho-ke akusekho lapho ukukuzwisa ubuhlungu.
Amathiphu okusiza ukuzwela kwamazinyo
Akumangalisi ukuthi kufanele ugweme ukudla okushisayo nokubandayo, okungadala ukuzwela kwamazinyo. Kepha kufanele futhi ugweme ukudla okunoshukela nokudla okune-asidi kakhulu, njengejusi yezithelo, iziphuzo ezibandayo, amaswidi omuncu, iziphuzo zezemidlalo, utshwala namakhukhamba - yebo, ukhukhamba! Ama-acids kulokhu kudla, kanye noshukela ophendukela kuma-acids emlonyeni wakho, aqeda izinyo lakho lozinyo futhi enze ukuzwela kube kubi kakhulu.
Yidla ukudla okunefayibha ephezulu - njengezithelo ezintsha nemifino efana nobhontshisi neklabishi - okuzosiza ukukhiqiza amathe nokuvikela ekuzweleni.
Thenga ngokudla okune-calcium - njengobisi noshizi - ukusiza ukwakha kabusha koqweqwe lwamazinyo nokunciphisa izinga le-asidi - izinga le-pH - lomlomo wakho.
Phuza amanzi, kaningi, bese uzama ukuthola okungenani izingilazi eziyisishiyagalombili ngosuku ukusiza ukugeza ama-acid okudla kanye ne-plaque.
Kuyini Ukuzwela Kwamazinyo?
Ingxenye yamazinyo akho engaphezulu kwe-gumline, imbozwe ungqimba loqweqwe lwawo oluvikelayo, kuyilapho izimpande ezingaphansi kwe-gumline yakho zivikelwe ngento ebizwa ngokuthi i-cementum. Ngaphansi koqweqwe lwawo no-cementum kukhona i-dentin, engaminyene kangako kunokumboza okuvikelayo. I-dentin iqukethe imisele emincane kakhulu ebizwa nge-dentin tubules, kuthi lapho koqweqwe lwawo noma usimende luphela noma lonakaliswe, luveza i-dentin. Lapho izinsini zakho sehla futhi ziveza i-dentin, ama-tubules avumela uketshezi ukuba lungene kuwo futhi athintwe ukushisa namakhaza lapho kungadala ukuthi izinzwa ezisezinyweni zibe nokuzwela nobuhlungu.
Kungani i-koqweqwe lwawo noma usimende kungaguga?
Kudla ukudla noma iziphuzo ezine-asidi kakhulu
Ukuxubha amazinyo akho ngolaka kakhulu
Ukusebenzisa ngokweqile imikhiqizo ethile yokwenza mhlophe kwamazinyo
> Kodwa-ke, ngamazinyo abucayi ngokweqile, izimbangela ezingaba khona kakhulu yilezo eziveza i-dentin ethe xaxa, njenge:
Amazinyo aphukile noma aqhekekile
Ngoba amazinyo abucayi ngokwedlulele abangelwa inkinga eyinkimbinkimbi yamazinyo, kubalulekile ukuthi ungene ku-OptiSmile futhi udaba luphathwe ngqo esihlalweni. Lokhu kungafaka umqhele, ukugcwaliswa noma ukuvezwa, kuya ngenkinga. Uma unesifo sezinsini esidlulele esigabeni esithuthuke kakhulu, uzodinga nalokhu kuphathwa. Uma ulahlekelwe izicubu zezinsini kusuka empandeni, kunganconyelwa ukufakelwa insini ukuze kuhlanganiswe izimpande ukuze zivikelwe futhi. Uma unokuzwela okuphikelelayo futhi okunzima, kufanele kuthathwe i-x-ray ukuthola ukuthi ngabe impande ingaba yini inkinga, esusa izinzwa ngakho-ke akusekho lapho ukukuzwisa ubuhlungu.